a - TECHNOMANIAC's - BLOG: Windy Macworld 2008 - !!!
Windy Macworld 2008 - !!!
Whatasweet! Thinnovation, no messy cables, rentals, pinch and swipe, triangular GPS, office 2008 & new apps. That's another lucrative event from Apple.
Herein, only burmese will write I. English posts are abundant everywhere on this news!
ကောလဟာလတွေ ထွက်ထားတဲ့အတိုင်း Macbook Air အမှန်တကယ်ထွက်ရှိလို့လာပါတယ်။ အင်မတန်ပါးလွှာပြီး အံမခန်းပါပဲ။ နောက်ဆုံးပေါ် ကြိုးမဲ့နည်းပညာတွေနှင့် intel က customized ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ ပရိုဆက်ဆာတွေ သုံးထားပါတယ်။ Multi-touch လုပ်လို့ရတဲ့ trackpad ကို သုံးထားပြီး လက် ၂ ချောင်းနှင့်သာမက လက်ဖ၀ါးနှင့် swipe, rotate များလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ ပုံမှန် IDE HDD ပါပြီး၊ စိတ်ဝင်စားရင် Solid State Drive သုံလို့ရပါတယ်။ အရမ်းကိုမြန်ပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်က X3100 on board ပဲ ပါလို့ နှေးတယ်ထင်ရပေမယ့် ကျွန်တော့် မက်ခ်ဘွတ်လေးက သူ့ထက်တောင် နိမ့်ပါသေးတယ်။ RAM 2GB ပါတဲ့အတွက် သက်တောင့်သက်သာ သုံးပါလေ့။ နောက်ပြီး ဘက်ထရီပါဝါက ၅နာရီတောင် ခံပါတယ်။ ပေါ့ပါးပြီး နေရာဝန်မကျယ်မှုကတော့ စိတ်ချပါ။ ခင်ဗျား စက္ကူအိပ်ထဲ ထည့်သွားရင်တောင် လက်ပတော့ပါမှန်း သိမှာမဟုတ်ဘူး။
အသေးစိတ်ကို apple.com မှာ သွားကြည့်ပါ။ စင်္ကာပူမှာ စတင်ရောင်းချနေပါပြီ။
နောက်တစ်ခုက iTunes Rental ပါ။ ခွေတွေကို တစ်ကားကို ၂.၉၉ နှင့် ငှားလို့ရပြီး ၊ အသစ်ဆိုရင် ၃.၉၉ ပါ။ ၀ယ်ပြီးရင် ၃၀ရက် အထားခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ ၂၄နာရီအတွင်း ပြီးအောင်ကြည့်ရပါမယ်။ HD တွေလည်း ငှားလို့ရပြီး ၁ဒေါ်လာပိုပေးရပါမယ်။
အိုင်ဖုန်းကတော့ features အသစ်တွေ ထည့်ပေးလိုက်ပြီး အများကြီးပိုကောင်းသွားပါတယ်။ SDK ကို နောက်လမှာ ထုတ်ပါမယ်တဲ့။
အိုင်ပေါ့တပ်ခ်ျ ကိုလည်း application ၅ မျိုး ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပြီး ဒေါ်လာ၂၀တောင်းပါတယ်။ လုံးဝပို ကောင်းတာမှန်ပေမယ့် ၀ယ်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
နောက်ဆုံး ကျွန်တော်သဘောကျတာကတော့ Time Capsule လို့ခေါ်တဲ့ Wireless NAS (network access storage) ပါပဲ။ ကျွန်တော့် အိမ်အတွက် ၁ခုလိုနေတာကြာပါပြီ။ 500 GB ကို စလုံး ၄၅၀ ကျော်လောက် ကျပါမယ်။ နည်းနည်း ဈေးကြီးပေမယ့် သူ့ရဲ့ Solution က လုံးဝ sheer ဖြစ်ပါတယ်။
သြော်ပြီးတော့ Mac Office2008 ထွက်ပါပြီ။ ဟုတ်ပါတယ် အရမ်းလှပါတယ်။ မြန်လည်း အတော်လေး မြန်ပါတယ်။ ၀င်းဒိုးသမား သူငယ်ချင်းတွေကတော့ မနာလိုဖြစ်နေလေရဲ့ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က ၀င်းဒိုးပေါ်မှာကြတော့ ဘာလို့အဲ့လောက် ကောင်းအောင်မလုပ်တာလဲဆိုပြီး။ .. ကွိကွိ။
ကဲ ခင်ဗျားကော ဘယ်ဟာ ၀ယ်မတုံး။ Macbook Air ကတော့ ဈေးကြီးတယ်ဗျ။ အဲ့တာ တစ်ခုတော့ သတိထားပါ။ ကျန်တာတွေကတော့ ပြောစရာမလိုအောင် ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ နောက် ၃လလောက် ကြာမှ ထပ်ဝယ်တော့မယ်။ ဒီနေ့ Macbook Pro update ထွက်မလားဆိုပြီး စောင့်နေတာ၊ ကျွန်တော်က အဲ့ဒါပဲ ချိန်နေတာ။ Air ကတော့ ကြည့်သေးတာပေါ့ ... :D
Posted by Wai Phyo at6:10 AM
Tags:2008,advice,apple,iphone,ipod,ipod touch,Mac,macbook air,macworld,news,office
Back from Trip - Eat Eat Eat week
More points to airy Macworld 2008
There's something in the Air, is there?
Open House First Day - Good
Mac Pro updates to please our boredom
Bad Weather, CES andaTrip
Tests, Musikr and Work